The Apple Pencil ishamwari yakanakisa yeiyo Pro Pro, uye shamwari yechokwadi yemusiki / musiki. Nekudaro, zvakare zvakareruka chaizvo kurasikirwa nekuda kwehukuru hwayo. Apple yakazivisa Penzura padivi peiyo yekutanga Pro Pro, zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kutora zvinyorwa, kudhirowa, uye kugadzira.
Iyo kambani yaisanganisira chimiro pane Penzura iyo yaibvumidza kuti ive nemagineti yakanamatira kune iyo iPad Mhepo, kana iPad Pro. Kunyangwe izvi, vashandisi vakati wandei vakarasikirwa neApple Penzura. Mune ino posvo, iwe unozodzidza kuwana yakarasika Apple Penzura uchishandisa yako iPad, uye zvakare kuburikidza neyakareruka Bluetooth yekutevera app. Iyi dzidziso inoshanda kune yekutanga uye yechipiri chizvarwa Apple Penzura chete.
Nzira yekuwana yakarasika Apple Penzura
Pane nzira dzinoverengeka dzaunogona kuwana yakarasika Apple Penzura, asi iwe unofanirwa kuchengetedza zvimwe zvinhu mupfungwa usati waenda kunotsvaga. Kutanga, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekusadzima Bluetooth pane yako iPad kana yekupedzisira yakabatana chishandiso. Kana ukadaro, ipapo Apple Penzura inogona kudimbura uye yoenda musimba saver modhi.
Tanga Settings app pane yako iOS kifaa uye musoro pamusoro pa MAKARALI USB. Iwe unogona zvakare kuvhura iyo Control Center kuti uende mukati mezvirongwa zveBluetooth.
Famba uchitenderera nzvimbo yaunofunga kuti wakapedzisira kushandisa Apple Penzura.
Kana iyo Penzura ichiri yakabatana kune chako chishandiso, inofanirwa kuratidza pane yeBluetooth runyorwa paunenge uri padhuze.
Iyo Apple Penzura ine huwandu hwegumi kusvika gumi nemashanu-tsoka, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti utsvage.
Iyi ndiyo nzira iri nyore yekuwana yako yakarasika Apple Penzura, asi iwe unofanirwa kutarisa kwakatenderedza nharaunda kwaioneka pane yeBluetooth runyorwa Zvichida zviri pasi pepiro, tafura, mubhedha, kuseri kwemakusheni, nezvimwe. Haugone kushandisa nzira iyi kana Bluetooth ikadzimwa usati watanga kutsvaga Penzura.
Imwe nzira yekuwana yakarasika Apple Penzura ndeye kushandisa Makaralı tracker app. Tiri kuzoshandisa iyo app inonzi Underfind. Heano maitiro ekushandisa iyo app uye tsvaga yakarasika Penzura. Zvekare, ita shuwa kuti hauna kudzima Bluetooth pane yako kifaa chakabatana.
Kutanga, tora iyo yemahara Underfind app kubva kuApp Store.
Vhura iyo app. Iwe uchaona runyorwa rweakabatana zvishandiso mukati mehurefu.
Famba-famba kusvika iwe waona iyo Apple Penzura iri munzvimbo. Iyo app inozokuratidza kuti uri kure zvakadii kubva kuPenzura.
Unogona kuyedza iyo Pro vhezheni, iyo inouya neMepu kuratidza yakanyatso nzvimbo.
Iyi Anwendung yakanaka, uye iwe unogona kushandisa yemahara vhezheni kuti uwane iyo stylus. Nekudaro, kana iyo Apple Penzura ine kupera mari, ipapo hauzokwanisi kuiwana. Tinokurudzira kuti iwe uedze dzese nzira dzatsanangurwa pamusoro, sezvo ese ari maviri anoshanda.
Iyo Apple Penzura ndiyo yakanakisa isina waya stylus kune chero munhu ane iyo iPad Pro kana kunyangwe iyo iPad Mhepo. Zviri nyore kurasikirwa, asi kana iwe uine rombo rakanaka, unogona kushandisa nzira dziri pamusoro kuti uzviwane nyore. Iwe unogona zvakare kuda kutora yakanaka kesi yeako iPad Pro iyo inouya neyakagadzika kuchengetedza zvakachengeteka Penzura. Nenzira iyi, hauzombozvirasa.
Apple iPad Mhepo (2020) ongororo: Iyo iPad yemwaka wese
10.5-inch uye 12.9-inch 2017 iPad Pro FAQ: Zvese zvaunoda kuziva!